Gụọ iPhone ozi ederede na a na kọmputa?
Apple ngwaọrụ ọrụ mara na iTunes nwere ike inyere ndabere data on iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, wdg, na ị ga-mara na iTunes ndabere faịlụ bụ unreadable na kọmputa gị. Ya mere, ọ ga-ndabere ozi ederede site na iPhone mere na ọ bụ ogugu dị ka a ederede na PC ma ọ bụ Mac?
N'ezie, azịza ya bụ ee. E nwere ụzọ abụọ. Onye mbụ bụ na wepụ gị iTunes ndabere-eme ka ọ ogugu, na ndị ọzọ ụzọ bụ ime ka ozi gị ogugu ozugbo gị iPhone. N'agbanyeghị nke ụzọ ị na-ahọrọ, ị chọrọ enyemaka si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). Ma software dị mma na ọrụ, na-agbalị nnọọ ma nke ha na-enweghị ihe na-echegbu.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a-agbalị. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị.
Ele iPhone SMS na kọmputa gị 3 nzọụkwụ
Ebe a ka anya otú ele ozi kpọmkwem site iPhone na Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ ma na-ele iTunes ndabere maka gị iPhone, na-aga ebe a: Olee otú ịchọta ma na-ele iTunes ndabere na kọmputa
Nzọụkwụ 1: Gbaa ndị omume na jikọọ gị iPhone
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị mgbe na nbudata na wụnye ya, na mgbe jikọọ gị iPhone na kọmputa.
N'ihi na iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5c / 5 / 4S, isi window nke usoro ihe omume ga-adị ka nke a:
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, isi window nke usoro ihe omume ga-adị ka nke a. Ị mkpa ibudata a nkwụnye na tupu ịgụ isiokwu gị iPhone maka data na ya.
Nzọụkwụ 2: iṅomi gị iPhone maka data na ya
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5 / 5C / 4S, ị nwere ike ozugbo iṅomi gị iPhone site na ịpị Malite iṅomi bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 / 3GS, i kwesịrị ga-esi n'ime gị iPhone si scanning mode ike iṅomi ya. Kedu? Ọ bụ nnọọ mfe.
Mbụ, jide gị iPhone na pịa Malite;
Nke abụọ, jide Ike na Home buttons n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd;
Ke akpatre, hapụ Ike button, na na-na Home button enwe.
Ọ bụrụ na ị banye na scanning mode, ị ga-enweta a window n'okpuru: usoro ihe omume na-ịgụ isiokwu gị iPhone maka data. Bụrụ na ọ bụghị, biko gbalịa ya ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Chekwa na ele iPhone ozi na PC
Mgbe iṅomi okokụre, a Doppler N'ihi dị ka ndị na ga-apụta. Ịnwere ike ihuchalu niile data na ya. Họrọ ozi na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. The zọpụta faịlụ bụ ụdị HTML faịlụ, nke na-enye ohere ị na-ele effortlessly.
Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko ibudata Mac version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS, ma na-yiri nzọụkwụ dị ka n'elu. I nwekwara ike ele iPhone ozi na Mac, na faịlụ nke HTML.
> Resource> iPhone> Olee otú iji ele iPhone Ozi na Mac ma ọ bụ PC